Exchange Platform Cutter Fibre Laser manapaka Machine OR-E - China Shandong Oree Laser
Tamin'ny laser fibre cutter
CO2 tamin'ny laser cutter & mpanora
Tamin'ny laser fibre fanamarihana toerana
Hand-natao tamin'ny laser welding milina
CO2 Laser Cutter & mpanora
Laser fibre Marker
Exchange Platform Cutter Fibre Laser Cutting Machine ...
Fiarovana tamin'ny laser fibre fanapahana milina OR-P
Home Ampiasao Fibre Laser Cutting Machine OR-S
Dual ampiasaina Sheet & TUBE tamin'ny laser fibre fanapahana Maky ...
Exchange Platform Cutter Fibre Laser Cutting Machine OR-E
Exchange sehatra fibre milina fanapahana dia afaka manapaka ny ankamaroan 'ny metaly fanitso, indrindra fa ny sehatra fifanakalozana afaka mamonjy mihoatra ny 50% ny toerana sy ny vidiny raha oharina amin'ny hafa, Mandritra izany fotoana izany, dia afaka hanatratra ambony sy ny fahombiazan'ny fametrahana mazava tsara fanapahana. Mora ho an'ny mpampiasa ny miasa foana. Mandritra izany fotoana izany, ny fivoriambe dingana henjana miantoka ny tranon'omby fiasan'ny ny milina avo marina tsara. Optical fibre tamin'ny laser fanapahana milina manome mpampiasa amin'ny fanapahana mahery sy mahay nafarana fahombiazana amin'ny kilasy ambony-Accessories.
Supply fahaizana: 250 Set / Sets isam-bolana
Fandoavam-bola Terms: L / CD / taorian'i JK / PT / T
Stainless vy, karbonina vy, firaka vy, lohataona vy, varahina lovia, aluminium takela, volamena, volafotsy, titane sy ny vilia vokatra.
Nampiasaina be teo amin'ny dokam-barotra, ny tsindry ambony / ambany malefaka famokarana herinaratra governemanta, damba Accessories fitaovana, fitaovana lakozia, fiara, milina, elevators, herinaratra Accessories, lohataona coil farantsa, Metro andalana faritra sy ny orinasa hafa.
Sehatra TAKALON'NY CUTTER tamin'ny laser fibre fanapahana milina OR-E
ny milina dia fitaovana miaraka amin'ny nanakalo miasa sehatra roa heny. Rehefa miasa eo amin'ny latabatra iray, ny sehatra hafa dia afaka hampidiran'izy sy notaterina ny lamba workpiece.
Ny fandriana vy niampatra
Flake manjarano nandatsaka vy amin'ny ambany indrindra tensile tanjaky ny 200 MPa. Karbaona avo afa-po, sy ny hamafin'ny compressive hery. Avo hisakana ny fiasan'ireny hatairana sy manao fanoherana. Tsara fanariana fampisehoana sady niteti fampisehoana. Tandremo ny marina ny milina fitaovana nandritra ny fotoana ela, niova nandritra ny 50 taona.
Yaskawa Electric dia mpanamboatra matihanina eo amin'ny sehatry ny fanaraha-maso mihetsika. Io no orinasa voalohany any Japana ho servo maotera. Ny vokatra dia samy fantatra amin'ny fahamarinan-toerana sy haingana, ary izy ireo-vola lany mahomby. Izy ireo no lehibe indrindra eran-varotra sy ny be mpampiasa indrindra servo marika ao amin'ny orinasa. Ao Shina, Yaskawa no nibodo ny anjara tsena lehibe indrindra nandritra ny taona maro.
-mijoro irery herinaratra fanaraha-maso ny governemanta
A governemanta izay mizara herinaratra angovo ho samy hafa ny asa, ary napetraky faritra samihafa dia antsoina hoe hery fizarana kabinetra. Amin'ny ankapobeny, dia hita ao amin'ny fizarana fahefana rafitra kabinetra. Ny tena anjara asa ny fanaraha-maso tsy miankina kabinetra nanaovana herinaratra dia ny mifehy ny voalohany sy intsony ny maotera. Ankoatra izany, dia afaka mifehy ny toerana sy ny hafainganam-pandehan'ny hazakazaka ny maotera. Ary rehefa levona ny maotera, dia tena mety sy haingana hanao tsiny tratra sy ny aretina tsiny. Inona no mihoatra, elektrika singa rehetra sy ny lasers dia naorina ho any amin'ny tsy miankina kabinetra fanaraha-maso ho an'ny vovoka-porofo endrika mba hanatsarana ny fiainan'ny singa herinaratra.
miasa Area 3000 * 1500mm 4000 * 2000mm 6000 * 2000mm
Repositioning araka ny marina 0.03 ± MG 0.03 ± MG 0.03 ± MG
-Araka ny marina ny toerany ± 0,02 MG ± 0,02 MG ± 0,02 MG
Maximum Speed 120m / min 120m / min 120m / min
miasa Table lelan latabatra lelan latabatra lelan latabatra
Maximum haingana 1.5G 1.5G 1.5G
Previous: LOHA birao tamin'ny laser fibre nanamarika Machine RT
Manaraka: HIGH HERY tamin'ny laser fibre fanapahana milina OR-H
DOKAMBAROTRA tamin'ny laser fibre fanapahana milina OR-PT
TUBE tamin'ny laser fibre fanapahana milina OR-T
LIGHT miisa TUBE tamin'ny laser fanapahana milina OR-TL
MOYEN-Sheet tamin'ny laser fibre fanapahana milina OR-FM
LOHA TAKALON'NY Sheet & TUBE tamin'ny laser fibre Cu ...
Dual ampiasaina Sheet & TUBE tamin'ny laser fibre fanapahana ...
OREE ara-toekarena tamin'ny laser Tube fanapahana machin ...
Address: NO.19-1, Jiyang Industry Park Street, Jinan, Sina CP: 251400